Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. नवलपरासीका उखु कृषक आन्दोलनमा – Emountain TV
नवलपरासीका उखु कृषक आन्दोलनमा
नवलपरासी, २९ फागुन । उखुको क्रसिङ सिजन सकिन लाग्दा पनि गत वर्षकै वक्यौता नपाएपछि नवलपरासीका उखु कृषक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानीको माग राख्दै उनीहरुले प्रतापपुरस्थित इन्दिरा सुगर मिल अगाडि धर्ना सुरु गरेका हुन् । ठूलो उद्योगको रुपमा रहेको इन्दिरा मिलले उखु क्रसिङ गरी चिनी विक्री गरेपनि आफूहरुलाई उखुको पैसा नदिएको कृषकहरुको गुनासो छ ।
दिनमा ३० लाखको दरले भुक्तानी दिने गरी सहमति भएपनि त्यसलाई मिलले कार्यान्वयन नगरेको कृषकको आरोप छ । तर, मिलले गोदाममा रहेको चिनी भने नगदमा विक्री गर्दै आएको छ ।
उखुको भुक्तानी नगरे अझै कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी पनि दिएका छन् । यता, संचालकले नै नचाहेकाले आफूहरुले कृषकसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको मिलका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्लाले स्वीकार गरे ।
जिल्लामा रहेका तीनवटा उखु मिलमध्ये सुनवल चिनी कारखाना बन्द भएपछि हाल इन्दिरा सुुगर मिल र बागमती खडसारी उद्योग सञ्चालनमा छन् ।